Inguqulo 0.9.7.2 – Wokunqamulela mfushane
July 29, 2015 by okunikezwayo Shiya amazwana
Isitimela khulula uye ekugcineni elibamba amanye speed, kanjalo siyaziqhenya ukwethula le nguqulo entsha.
Le nguqulo futhi fixes isibambeli Google, lokhu okwenzekayo ngoba kukhona izinto thina ngempela ngeke ukulawula. Kodwa futhi, kusebenza.
Elinye ushintsho ezinye kwamaphutha in wokunqamulela, ungakwazi ukufunda okuningi imibhalo ngcono in the link elandelayo:
Support Shortcode e Transposh WordPress Plugin
Izinguquko main zihlanganisa eyengeziwe [tpe] shortcode lapho kwanezelwa phezu abadala .
Le code isetshenziswa self befaka amakhodi, lapho akudingekile ukuba ukuvala tag, lokhu kungenxa yokuthi a caveat e wordpress okubangela
ikhodi yokwehlukanisa ukuya berserk lapho ukuxuba wokunqamulela self-ebiyelwe kanye lokuvala.
Godu, akukho isidingo ucacise ="y" noma, kanjalo manje [tpe mylang] Bayomane ukusebenza kanye okukhipha: zu
Sikunxusa ukuba kuthuthukiswe, futhi ujabulele le nguqulo entsha.
Inguqulo 0.9.7.1 – Sine a indawo entsha
July 22, 2015 by okunikezwayo Shiya amazwana
Into yokuqala yokuqala, sithanda ukubonga ngokujulile Christopher kusukela LPK Studio – http://lpkstudio.com/ ngoba design entsha ye website yethu, lokhu website entsha ekugcineni izindinganiso web amasha namuhla kufanele ibonakale kumadivayisi akho eselula.
We ngempela wayekujabulela esebenza Christopher on this, futhi kwaba ephumelelayo kakhulu, ophendulayo, futhi bekwazi lokho esasikudinga ngisho nangaphambi sabuza 🙂
Le website entsha kuhambisana ukukhululwa entsha, lutho ezinkulu lapha kodwa izimbungulu ambalwa ayehambe indlela kaDodo.
Ungase futhi usebenzise + uphawu ngaphakathi izinguqulo
Kwezinye izikhathi, izigaba eside abakutholanga efanele othomathikhi translation kusuka Google
Isula izinguqulo ezindala akazange asebenze ngempela 0.9.7.0
Jabulela version entsha, futhi uqiniseke ukuthi uthuthukela le okufushane umnyuziki, khulula yayo.